China Weeton 728 abụọ-akụrụngwa Pu mgbanwe nkwakọ nrapado emepụta na suppliers | Huitian
Weeton 728 Abụọ-akụrụngwa Pu mgbanwe nkwakọ nrapado
Enwere ike ịhazi usoro agwakọta n'etiti 20: 3.0-5.0 dịka ọnọdụ ọrụ akọwapụtara.
728 anaghị emetụta oghere nke ihe nkiri dị n'ime mgbe emechara. Mgbe ọ gwọchara, nrapado ahụ bụ transperent, enweghị isi, na-agbanwe na ịka nká.
Ndụ ndụ magburu onwe ya: mgbe agwakọtara ihe abụọ ahụ, oge ndụ ahụ nwere ike iru 8h, nke gosipụtara arụmọrụ kacha mma. Ngwakọta agwakọta nwere ike ịchekwa maka 24h na akpa akara.
Ọgwụgwọ ngwa ngwa: N'okpuru ọnọdụ 50 ℃, a pụrụ ịgwọta ngwaahịa ahụ kpamkpam mgbe ụbọchị 1 gasịrị. Maka ngwugwu nkwakọ ngwaahịa ihe mkpuchi okpukpu atọ, ihe nkiri nke atọ nke ihe nkiri kwesịrị ka a ghee ya karịa ihe karịrị awa 24 nke akwa lamination abụọ. Oge ọgwụgwọ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ bụ ụbọchị 7-14.
Ezigbo ike ike.
OPP / PE, OPP / CPP, Naị / Pee, PITA / Pee, OPP (PITA) / VMCPP. (Ihe nkiri dị mkpa ka a taa ahụhụ ọgwụgwọ iji rute nsogbu ahụ.)
Ihe nlere n'efu nye ndị ahịa gburugburu ụwa.
* Nkwado teknụzụ::
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọkachamara nyocha nwere ike ịza ụdị ajụjụ niile na usoro nke iji ngwaahịa na ntanetị. N'otu oge, anyị na-enye a zuru set nke nkwakọ nrapado ngwọta maka ahịa. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ụlọ ọrụ anyị ga-eziga ndị ọkachamara na saịtị ebe ndị ahịa na-eji ngwaahịa iji dozie nsogbu maka ndị ahịa.
Ngwaahịa a dabara maka mmepụta nri na ọgwụ nkwakọ ngwaahịa, dabere na mkpa dị mkpa nke FDA 175.105 na China GB-9685. Njirimara nke gluu a gwọrọ n'ụzọ zuru oke dị na ndokwa ndị dị mkpa nke EU 2002/72 / EC na akwụkwọ mgbakwunye ya 2004/19 / EC.
Hot gbazee nrapado
Hot gbazee nrapado N'ihi Akwụkwọ